Semalt Islamabad Expert - Inona no tokony ho fantatrao momba ny mpitrandraka tranokala
A mpitsikilo ny mpitsikilovana (search engine) dia fampiharana, script na fandaharana izay mandeha amin'ny World Wide Web amin'ny fomba ofisialy mba hanomezana vaovao vaovao ho an'ny motera manokana. Efa nanontany tena ve ianao hoe nahoana no misy vokany isan-karazany isaky ny manonona teny fanalahidy mitovy amin'ny Bing na Google ianao? Satria ny tranonkala dia nakarina isaky ny minitra. Ary rehefa navoaka ny tranonkalan'ny mpilatsaka an-tserasera dia mihazakazaka amin'ny tranonkala vaovao.
Milaza i Michael Brown, manam-pahaizana malaza avy amin'ny Semalt , fa ireo mpitsikilo amin'ny tranonkala, fantatra ihany koa amin'ny endriky automatique sy ny spider web, dia miasa amin'ny algorithm hafa ho an'ny karoka fitadiavana samihafa. Ny dingan'ny fitifirana tranonkala dia manomboka amin'ny famantarana ny URL vaovao izay tokony hotsidihana na noho izy vao navoaka na noho ny sasantsasany amin'ny tranonkalany amin'ny tranonkala. Ireo URL fantatra ireo dia fantatra amin'ny anarana hoe masomboly amin'ny teny motera.
Nalefa an-tserasera ireo URL ireo ary naverina naverina nodinihina amin'ny fomba amam-panao vaovao entina amina sehatr'asa vaovao sy ny politikan'ny mpitifitra. Mandritra ilay fitsidihana, ny mari-pamantarana rehetra hita ao amin'ny tranonkala tsirairay dia fantatra sy ampidirina ao amin'ny lisitra. Amin'izao fotoana izao dia zava-dehibe ny milaza mazava tsara fa ny karazana fikarohana hafa dia mampiasa algorithms sy politika samihafa. Izany no mahatonga ny fahasamihafana amin'ny valin'ny Google sy ny valin'ny Bing amin'ny teny fanalahidy mitovy, na dia betsaka aza ny fitoviana.
Mitady asa goavana ny fitifirana tranonkala mitazona fitaovam-panadiovana. Raha ny marina dia sarotra be ny asany noho ny antony telo etsy ambany.
1. Ny habetsahan'ny pejy ao amin'ny Internet amin'ny fotoana rehetra. Fantatrao fa vohikala an-tapitrisany maro no hita ao amin'ny tranonkala ary maro no atomboka isan'andro. Arakaraky ny habetsahan'ny tranonkala ao anaty aterineto, ny henjana dia ho an'ny mpikirakira ny toetr'andro.
2..Ny paikadin'ny tranonkala. Azonao atao ve ny mieritreritra hoe firy ny tranokala vaovao no asaina isan'andro?
3. Ny habetsaky ny tranonkala dia miova na amin'ny tranonkala efa misy ary ny fampidirana pejy miavaka.
Ireo no olana telo mahatonga ny sarotra ho an'ny spider web ho toetr'andro. Raha tokony hikirakira tranokala eo amin'ny fototra aloha vao tonga, dia maro amin'ireo tranonkala marobe no manome alàlana ny pejy Internet sy ny rohy. Ny laharam-pahamehana dia mifototra amin'ny fitsipika ankapobeny fikarohana tokana 4.
1. Ny politikam-pifidianana dia ampiasaina amin'ny fisafidianana izay pejy nakarina noho ny fikisihana voalohany.
2. Ny karazana politika fanodinkodinana dia ampiasaina amin'ny famaritana ny fotoana sy ny fomba fahitana matetika ny pejy web ho an'ny fanovana azo atao.
3. Ny politikam-pampandrosoana dia ampiasaina mba handrindra ny fomba fizarana ny mpitsikilovana mba handrakotra ny voa rehetra.
4. Ny politika henjana ampiasaina dia mamaritra hoe ahoana no ahodinkodina ny URL mba tsy hivezivezena any amin'ny tranokala.
Mba hahazoana fandrakofana haingana sy marina ny masomboly dia tsy maintsy manana teknikam-pitadiovana lehibe izay ahafahana mametraka laharam-pahamehana amin'ny alàlan'ny tranonkala, ary tsy maintsy manana tranokala tena tsara izy ireo. Ireo roa ireo dia hanampy azy ireo hitsikilo sy hamoaka pejy an-jatony tapitrisa ao anatin'ny herinandro vitsivitsy.
Amin'ny toe-javatra tena izy, ny pejin-tranonkala tsirairay dia nesorina tao amin'ny World Wide Web ary navoaka tamin'ny alalan'ny rindrambaiko maromaro, taorian'izay, ny tranonkala na ny URL-n'ny URL dia nodidiana alohan'ny handefasana azy ireo amin'ny alàlan'ny laharam-pahamehana ho an'ny laharam-pahamehana. Ny URL-n'ireo laharam-pahamehana dia naverina indray tamin'ny alalan'ny rindrambaiko miverimberina mba hahafahan'ireo metadata sy andinin-tsoratra hitehirizana azy ireo.
Amin'izao fotoana izao dia misy marika fikarohana na mpitsikilo maromaro. Ny iray ampiasain'ny Google dia Google Crawler. Raha tsy misy ny tranonkala finday, ny valin'ny pejy finday dia hamerina ny valiny nero na ny votoaty efa lany andro satria ny pejy web vaovao dia tsy ho hita velively. Raha ny marina, tsy misy zavatra toy ny fikarohana an-tserasera Source .